विवाह गरेको १५ मिनेटमा नै सम्बन्ध विच्छेद – Medianp
विवाह गरेको १५ मिनेटमा नै सम्बन्ध विच्छेद
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २७, २०७५१२:२६0
एजेन्सी, २७ जेठ । जिन्दगी भरी संगै बाच्ने दुःख सुःखमा हातेमालो गर्दै रमाउने बाचाको साथ विवाह गरिएको हुन्छ । तर पछिल्ले समयमा यो भनाई विल्कुलै परिवर्तन भएको छ ।
अधिकांश मानिसहरु विवाह गरेको केहि समय वा सन्तान जन्मिएपछि सम्बन्ध विच्छेद गरेको पाइन्छ । तर दुबईमा भने सम्बन्ध विच्छेदले विचित्र ने बनाएको छ । दुबइएमा एक जोडीले विवाह गरेको १५ मिनेटमा नै सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन् ।
‘गल्फ न्यूज’ अखबारका अनुसार दुवैको शरिया न्यायालयमा एक जोडिले विवाह गरेको १५ मिनेटमा नै सम्बन्धबिच्छेद भएको हो ।परम्परा अनुसार सो स्थानमा बिवाह गर्नको लागी बेहुला पक्षले ठूलो रकम दिनु पर्ने हुन्छ । साहि अनुसार बेहुलीका पिताले बेहुला पक्षसँग २० हजार पाउन्ड रकम माग गरेका थिए । बेहुलीका पिताले रकम माग गरेपछि बेहुलापक्षले पनि उक्त रकम दिने सहमति जनाएर विवाह भएको थियो ।
विवाहकै क्रममा बेहुलापक्षले ५० प्रतिशत रकम बुझाएको थियो । विवाह दर्ता भइसकेपछि बाँकी रकमका लागि बेहुलीका पिताले दबाब दिएको उक्त अखबारले जनाएको छ ।बेहुलाले ५ मिनेटको पैदल दुरीमा पार्क गरिएको आफ्नो कारमा रकम रहेको जनाउँदै बेहुलीका पितालाई ‘पार्किङ’ मै गएर बाँकी रकम तिर्ने बताएका थिए । तर, बेहुलीका पिताले कारमा राखेको रकम लिन अरु कसैलाई पठाउन दबाब दिदैँ पुरा रकम नपाएसम्म आफूले छोरीलाई लैजान नदिने बताएपछि तनाव बढेको थियो । दुलाहा पक्षले बेहुलीका पिताको यस्तो दबाबलाई ‘आफ्नो अपमान’ महसुस गर्दै तत्काल सम्बन्धबिच्छेद गरेको बताइएको छ ।
चीन र भारत फेरि किन नजिकिन थाले
‘मिस्टर एण्ड मिस एम्पेरर’को काठमाण्डौ अडिशन असार ३ गते
३ वर्षीय बालकलाई आफ्नै आमाको ब्वाइफ्रेण्डले कारमै कुटपिट गरी मारे
जहाजमै पाइलटबीच कुटाकुट भएपछि यात्रुहरु चार घण्टासम्म अलपत्र
साँझपख भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी काम ! जसको कारण धन नाश हुनेछ !
३५ वर्षयता एकै रंगको कपडा मात्र लगाउँछन् यी व्यक्ति, आखिर के छ रहस्य ?